PDF Gadzira Chishandiso. PDF Kudzorera Software. Gadzirisa PDF Faira.
DataNumen PDF Repair is yakanakisisa PDF kupora chishandiso munyika. Inogona kugadzirisa yakaora kana kukuvara Acrobat PDF mafaera uye kudzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa muhuori hwefaira.
4.90 / 5 (kubva 1,649 mavhoti)
Sei DataNumen PDF Repair?
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen PDF Repair v3.0
Tsigiro yekudzosera dzese shanduro dzeAcrobat PDF mafaira.
Tsigiro yekudzoreredza mapeji pamwe nemifananidzo mu PDF zvinyorwa.
Kutsigira kugadzirisa zvakasiyana PDF faira fomati zvikanganiso.
Kutsigira kugadzirisa PDF mafaera asingaenderane ne PDF kutaurwa.
Kutsigira kugadzirisa PDF mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch ye PDF mafaira.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo PDF mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemuno.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa Acrobat PDF faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
kushandisa DataNumen PDF Repair Kudzoreredza Zvakakuvara Kana Kuora PDF Files
Kana yako Acrobat PDF mafaira akakuvadzwa kana akaora uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen PDF Repair kuongorora iyo PDF mafaira uye dzosa iyo data kubva kumafaira zvakanyanya sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzorera chero chakakuvara kana chakaora PDF faira ne DataNumen PDF Repair, ndapota vhara Acrobat Reader uye chero mamwe maapplication anogona kuwana iyo PDF ikwidzwe.
Sarudza iyo yakakuvara kana yakashata PDF faira ichagadziriswa:
Unogona kuisa iyo PDF faira zita zvakananga kana tinya iyo
bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo
bhatani kuti uwane iyo PDF faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
By default, DataNumen PDF Repair ichaponesa iyo yakagadziriswa PDF faira mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.pdf, uko xxxx ndiro zita rezvinobva PDF faira. Semuenzaniso, for source PDF faira Yakakuvara.pdf, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira richava Damaged_fixed.pdf. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Iwe unogona kuisa iyo yakamisikidzwa zita refaira zvakananga kana tinya iyo
bhatani rekutarisa uye sarudza iyo yakamisikidzwa faira.
bhatani, uye DataNumen PDF Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi PDF faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iri sosi PDF faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakagadziriswa PDF faira neAcrobat Reader kana imwe PDF enderana mafomu.
DataNumen PDF Repair 3.0 inoburitswa muna Chivabvu 4, 2021
Tsigira mitauro yakawanda muGUI.
Tsigira Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Japanese, Korean uye Simplified Chinese.
DataNumen PDF Repair 2.6 inoburitswa muna Zvita 21, 2020
DataNumen PDF Repair 2.4 inoburitswa munaNovember 6th, 2020
DataNumen PDF Repair 2.3 inoburitswa munaNovember 11th, 2019
DataNumen PDF Repair 2.1 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 31, 2013
Tsigira Windows 7 uye 8.
DataNumen PDF Repair 2.0 inoburitswa munaKurume 16, 2009
Nyorazve injini yekugadzirisa.
DataNumen PDF Repair 1.0 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 4, 2005
Chishandiso chine simba chekutora chakaora Acrobat PDF mafaira.
Gadzirisa uye dzosa zvakaora Microsoft Word zvinyorwa (.doc uye .docx mafaera).
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.6 inoburitswa munaGunyana 2, 2021
DataNumen Exchange Recovery 8.6 yakaburitswa muna Chikunguru 30, 2021
DataNumen Outlook Repair 8.6 yakaburitswa muna Chikunguru 10, 2021